जतिसुकै बिजि भएपनी केबल १ मिनेट समय दिएर पढ्नैपर्ने कुरा ! नपढे तपाईंलाई पछुतो हुनेछ ! - Mitho Khabar
जतिसुकै बिजि भएपनी केबल १ मिनेट समय दिएर पढ्नैपर्ने कुरा ! नपढे तपाईंलाई पछुतो हुनेछ !
September 20, 2020 October 27, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on जतिसुकै बिजि भएपनी केबल १ मिनेट समय दिएर पढ्नैपर्ने कुरा ! नपढे तपाईंलाई पछुतो हुनेछ !
जति सुकै बिजिभए पनी केबल २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोला ! जतिबेला तपाईंको मृ,त्यु हुन्छ त्यही समयदेखि तपाईंको पहिचान एक ला,स बन्न सुरु गर्छ । अरे … ला,स लिएर आउनुहोस्। … ला,स लाई उठाउनुहोस्। .. ला,स लाई सुताउनुहोस। . यस्तै शब्द ले तपाइँलाई बोलाउछन ति मान्छेहरूले तपाइँलाई तपाईंको नामले बोलाउने छैनन् , जसको लागि तपाईंले आफ्नो सम्पुर्ण जिबन बिताउनुभयो ।
त्यसैले यता उताबाट धेरै सम्पत्ति जम्मा गर्नुको कुनै औचित्य छैन । राम्रोसँग कमाउनुहोस् राम्रोसँग खानुहोस् र राम्रोसँग सुत्नुहोस् । जिबनमा आइपर्ने हरेक चुनौतिलाई स्विकार गर्नुहोस् । आफुलाई मनपर्ने सामनको लागि खर्च गर्नुहोस् ।यति हाँस्नुहोस कि तपाईंको पेट नै दुखोस । तपाईं जति नै नराम्रो नाच्नुहुन्छ ।
फ़ेरि पनि नाच्नुहोस । ति खुशिहरु महसुस गर्नुहोस् । फोटोहरु खिच्नको लागि पागल जसरी पोज दिनुहोस् । एकदम सानो बच्चा जस्तै बन्नुहोस । किनकि मृत्यु जिबनको सबैभन्दा ठूलो लास होइन । लास त त्यो हो तपाईं जिउँदो भएर पनि तपाईं भित्र जिन्दगी जिउनुको आशा हराउदै गएको छ हरेक पल हाँसी खुशी जिन्दगी बिताउनुलाई नै जिन्दगी भनिन्छ।
जिन्दगी थोरै छ हरेक पल म खुशी छु काम मा खुशी छ, आराम गर्दा खुशी छु आज खाना मा मासु छैन, दाल मा पनि म खुशी छु आज गाडी छैन हिडेर जान पनि म खुशी छु साथिहरुको साथ छैन एक्लै पनि खुशी छु\_ आज कोही रिसाएको छ उ रिसाएको छ मलाई थाहा भएर पनि म खुशी छु।
जसलाई देख्न सक्दिन उसको आवाज सुनेर पनि खुशी छु। जसलाई पाउन सक्दिन उसको बारेमा सोचेर पनि म खुसी छु। हिजोको दिनहरू बितिसकेको छ उसको मीठो सम्झनामा पनि म खुशी छु.भोलिको बारेमा थाहा छैन पर्खाइमा पनि म खुशी छु. हाँस्दै खेल्दै बित्दै छ समय आज मा पनि म खुशी छु. जिन्दगी छ छोटो हरेक पल म खुशी छु । यदि यि माथिका लेखहरु मनमा छुयोभने जवाफ दिनुहोस्। नत्र त म बिना जवाफमा पनि खुशी छु ।
October 23, 2020 Suman Pandey
चर्चित टिभी सिरियल ‘कुमकुम भाग्य’को डायलग दोर्याउदै सन्नी लियोनि
September 12, 2020 Suman Pandey